vapoteri - ALinks
Maitiro ekunyorera kwekupotera muBelgium?
Dai 9, 2022 Demi Bherujiyamu, vapoteri
Unogona chete kunyorera kupotera muBelgium kana uchitya kutambudzwa munyika yako. Belgium inoyerera UNHRC 1951 Kokorodzano Ine chekuita neChimiro chevapoteri. Zvakare, vese vatorwa vanopinda muBelgium vane kodzero yekunyorera kupotera.
Maitiro ekunyorera asylum muAustria?
March 29, 2022 Demi Ositiriya, vapoteri
Unogona kunyorera hupoteri muAustria kana uchinzwa usina kuchengetedzeka munyika yako. Uye kana nyika yako isingakwanise kukudzivirira. Iwe unofanirwa kuve uripo iwe pachako muAustria. Unogona kutora hupoteri iwe pachako
Nzira yekuwana sei asylum muIreland? Vapoteri muIreland
March 28, 2022 Shubham Sharma Ayarendi, vapoteri
Unogona kuwana hupoteri muIreland kana uri muIreland. Unogona kutanga kutora hupoteri muIreland nenzira mbiri. Iwe unogona kushanyira kutonga kwepasipoti paunongosvika kuIreland. Kana kuti unogona kuenda pachako
Maitiro ekunyorera asylum muBelize
March 10, 2022 Shubham Sharma Kutsigira, vapoteri, famba
Belize inyika yeCentral America iri muGungwa reCaribbean. Nyika ine nharaunda ye22,970 km² (8,869 mi²) uye yakazara mhenderekedzo yegungwa ye386 km (239.8 mi). Iyi nzvimbo yevhu inodaidzira 91% yenzvimbo ye
Nzira yekuwana sei asylum muAlgeria?
February 28, 2022 Shubham Sharma Arujeriya, Kutsigira, vapoteri
Kunyorera hupoteri muAlgeria Hofisi yeUNHCR muAlgiers chete ndiyo inogamuchira uye inonyoresa zvikumbiro zvehupoteri. Unogona kuvabata panhamba dzinoti +213 (0) 23 05 28 53 kubva Svondo kusvika China, h. 09:00-12:30-14:00-16.30, kuti uwane ruzivo rwekunyora. Unogonawo
Maitiro ekunyorera asylum muEl Salvador?
February 18, 2022 Demi E Savhadho, vapoteri
IUnited States, Mexico, neSpain dzave dziri nzvimbo dzakakurumbira zvikuru. Inosvika 70% yezvikumbiro zvehupoteri zvakarambwa. Vapoteri muGermany nePanama vakabudirira zvikuru. Muna 2020, 14,999 vanhu vakatiza El Salvador vakanyorera
Maitiro ekutsvaga hupoteri muBurkina Faso?
January 30, 2022 Demi Burkina Faso, vapoteri
Unogona kutsvaga hupoteri muBurkina Faso paunongopinda munyika nekukumbira kuvakuru venzvimbo kana kuhofisi yeUNHCR. Burkina Faso ndiyo yakasaina 1951 United Nations Convention ine chekuita neStatus of